Maitiro ekuwana izvo zvitsva zveGmail maficha pane Android ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Maitiro ekuwana izvo zvitsva zveGmail maficha pane Android
Maitiro ekuwana izvo zvitsva zveGmail maficha pane Android, ine posvo pane yepamutemo Google blog, timu yeGmail inozivisa kuti vanayo yakagadzirisa mashandiro anoita akawanda-inbox system, nhau dzinozotanga kuwanikwa munguva pfupi iri kutevera.
Pakati pekuchinja kune hukama nesystem nyowani ndeye kubvisa matatu-pane dhizaini neyekutanga pane maonero (avo vanoshandisa basa iri, segadziriro nyowani ichave iripo, haizoratidze yekutarisa pane kana vane anopfuura rimwe chete bhokisi rekutarisa, tarisa tsamba).
Vaya vanoda kuramba vachishandisa maonero aya vanofanirwa kuenda ku Kugadziridza Menyu uye mu Tereyi chikamu input sarudza imwe sarudzo yakasarudzika kupfuura dzakawanda.
Zvimwe zvinhu zvitsva zvakaunzwa nechikwata che Gmail inosanganisira kusarudzazve sarudzo kune dzakawanda maakaundi mumenu yekumisikidza, yega scroll scroll bar yega yega mailbox (kuti vagone kupururudza vakazvimiririra kune mumwe nemumwe), uye chiito chekushandisa pane akawanda mabhokisi ematsamba.
Gmail: Maitiro Ekuvandudza
Nhau dzakaziviswa neGoogle dzichaburitswa zvishoma nezvishoma kubva munaKukadzi uye dzinofanirwa kuwanikwa kune vese vashandisi mumavhiki mashoma. Ingova nemoyo murefu.
5 dzakakosha shanduko kune iyo nyowani Gmail:
Iwe unogona kutora zviito paemail zvakananga kubva kubhokisi rako rekunyora.
Iyo nyowani 'yekusundira' ficha inoshandisa huchenjeri hwekunyepedzera hweGoogle kuti unzwisise kuti meseji ingangove yakakosha uye inoidzokorora kukuyeuchidza kupindura.
Iyo "zvakavanzika maitiro" inobvumira, kana uchinyora email, kusarudza kuti mutoreri achakwanisa kuiverenga kwenguva yakareba sei. Vanogamuchira havazokwanise kuendesa mberi, kuteedzera nekunamatira, kurodha pasi kana kupurinda zvirimo.
Zvikuru zvekutanga zviziviso zvinongozivisa chete maemail matsva ayo Google
Yakavakirwa-mukati mamiriro ekunze anotendera kuti uchengetedze kusvika pamazuva makumi mapfumbamwe emaimeri uye tsvaga kunyangwe kana usiri pamhepo.
Google inoburitsa Android 12 Yekuvandudza Ratidziro 1
Android 12: Icho Chinoenderana NEXT interface inogona kutaridzika
Netflix inoenderana neApple neAV1 codec
Maitiro ekumisikidza Google izwi typing pane Android